Ukuphupha ngoReifrock ➡ ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Isiketi sehupula yipitikoti eyahlulwe ngomthi, umnenga, okanye iihupula zentsimbi yasentwasahlobo. Kuxhomekeke kubume okanye ixesha lexesha, ukwahluka kwesiketi hoop kuyabonakala.
Umxhomi unentsimbi kwaye wavela eSpain ngenkulungwane ye-XNUMX. Ngenxa yesi sizathu, kwinkulungwane kamva, kwisambatho saseSpain esasifana nekhowuni, senziwa intaba.
Isibhengezo savela eFrance ngenkulungwane ye-XNUMX. Ubume bayo ekuqaleni babufutshane kwaye butho. Nangona kunjalo, emva kwexesha elifutshane, yathatha imilo yedome kwaye yandiswa kakhulu. Esi siketi hoop sityala igama laso kwimo yaso yoqobo ngokufana nokufana neebhasikithi zenkukhu ezazisetyenziswa ngelo xesha.
Ukuqala ngo-1830, isondo le-hoop lafumana ukuphakama okutsha njenge-crinoline. Ekuqaleni, i-crinoline yayiyi-petticoat, ilaphu layo laye laqiniswa laza labunjwa ngehashe. Ekugqibeleni, nangona kunjalo, ulwakhiwo olwenziwe ngemicu yentsimbi yasentwasahlobo lwaphumelela. Esi siketi hoop sifikelele kububanzi obugqithisileyo kunye nomjikelezo wehem ukuya kuthi ga kwiimitha ezisibhozo.
I-crinoline ekugqibeleni yathathelwa indawo yinto ebizwa ngokuba kukhenketho. Oku akusangqinelani nesisu sonke, kodwa kukudumba isiketi ngaphezulu kweempundu. Nangona kunjalo, ukuya esiphelweni senkulungwane ye-XNUMX, isondo lengubo ekugqibeleni lawa kwifashoni. Namhlanje iphantse isetyenziswe kwilokhwe yomtshato okanye kwisinxibo.
1 Uphawu lwephupha «ihupula isiketi» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ihupula isiketi» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «crinoline» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ihupula isiketi» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha kutolika uphawu "isiketi esisuka phezulu" njengesilumkiso kumphuphi on el mundo yomlindo sele eza kuzenza isidenge. Kuya kufuneka ujonge indlela oziphatha ngayo ngoku kunye nezicwangciso zakho zexesha elizayo ukuze uchonge okunokwenzeka Ingcaciso ukubaleka.
Kwakhona, iphupha lesiketi sehupula linokubonisa ukuba kungekudala uza kuphulukana nento oyithandayo. Ke ngoko kuyacetyiswa ukuba uvuke kakhulu kwixa elizayo. ingqalelo yiba yiyo. Ukuba umntu oleleyo enxibe isondo elinjalo ephupheni, oku kunokuqondwa njengomnqweno wokuqwalaselwa.
Ukuba isondo lehupula liqinile ephupheni, oku kungalumkisa ngokungahambi kakuhle kwilizwe lokwenene kwiphupha lomfazi. Ukuba indoda iphupha ngale meko, inokuzibona ibandakanyeka kulonwabo oluthandabuzekayo. Ukuba uzibona ephupheni njengomtshakazi enxibe isondo lengubo, kunokuba njalo. Yintlungu uphawu phambi kobudlelwane obumiselweyo okanye obuthintelayo.
Ukunxiba isondo lengubo phantsi kwengubo yangokuhlwa okanye phantsi kwempahla yomnyhadala kufanekisela impumelelo kwiiprojekthi ezithile zobomi bokuvuka. Njenge petticoat phantsi kwengubo yesiko, isiketi sehupula sinokunxitywa xa ulele Imilinganiselo yesiko bonisa ukuba zeziphi ezibalulekileyo kulowo uleleyo. Kodwa ngamanye amaxesha uziva ngathi oku kuyakuthintela.
Ukuba ephupheni i-petticoat efana ne-hoop skirt isetyenziselwa ukubonisa i-skirt, umntu kufuneka alumkele ukuzikhukhumeza kunye nenkunkuma.
Uphawu lwephupha «ihupula isiketi» - ukutolikwa kwengqondo
Ukusuka kwimbono yengqondo, umfanekiso ofana nephupha "wesiketi se-hoop", njengoko unxitywe phantsi kwengubo, unokuqondwa njengokulangazelela ukwabelana ngesondo. Kodwa kwanokunqwenela kokomoya Unión inokubonakaliswa kwiphupha elinje.
Ukutolikwa kwengqondo, umbala we-crinoline nawo udlala indima ebalulekileyo ekulaleni. Isiketi esimhlophe sehupula ephupheni sinokubonisa ukungabikho kwemvakalelo. Nangona kunjalo, ukuba isiketi hoop sibomvu ephupheni, iphupha elo kufuneka libe nalo Ukuthanda dibana ne.
Uphawu lwephupha «crinoline» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba lokomoya lohlalutyo lwamaphupha, isiketi hoop sitolikwa ephupheni njengenxalenye yempahla. Ke ngoko, ngokufuziselayo, naye uza kuye Umsebenzi wokukhusela ukuya. Nangona kunjalo, inokuthi iqondwe njengesalathiso kwicala lobufazi lalowo uphuphayo.